မြန်မာသံကို သီဆိုရင်း အိုက်တင် အပေးကောင်းတာကြောင့် အားပေးခံနေရတဲ့ နီနီရဲ့ ခင့်မှာတမ်း (ဗီဒီယို) – ရှအေလငျး
မြန်မာသံကို သီဆိုရင်း အိုက်တင် အပေးကောင်းတာကြောင့် အားပေးခံနေရတဲ့ နီနီရဲ့ ခင့်မှာတမ်း (ဗီဒီယို)
Vidoe ကိုအောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။
နီနီ ခင်ဇော် တစ် ယာက် မ တူညီ တဲ့ ဖျော်ဖြေ မှု အ သစ် အ သစ် တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရသမျိုးစုံပေးတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကိုင်လှုပ်နိင်စွမ်းရှိတာ အားလုံးအသိပါ။ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း နီနီတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေ ဝါးခနဲ အံ့အားသင့် စေမယ့် တေးဂီတ နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းတိုလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
ခင့်မှာတမ်း အမည်ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးကို ကိုလိုနီခေတ်နောက်ခံ ပုံစံ နဲ့ ပြန်အလည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ ။ နီနီတစ်ယောက် ခေတ်ဟောင်းတေး ပုံစံ နဲ့ တင်ဆက်ထားပြီး သီချင်းတစ်ခုလုံးကို ဇာတ်လမ်း ပုံစံနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ် ။
အိုင်ဒီယာဆန်းတဲ့ နီနီဟာ သူမ ကိုယ်ပိုင် Branding ဖြစ်တဲ့ Super Red တံဆိပ်တွေကို ပါ ကြော်ငြာသဘောမျိုးနဲ့ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတော့ တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်လောက်ပြတ်သဘောမျိုး ဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ မမလေးရေ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို မှတ်ချက်တွေမှာ နီနီအတွက် ဂုဏ်ပြုပြောဆိုနေကြသလို ၊ ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ ကလည်း ထောင်သောင်းမက အားပေးကြမ်းခဲ့ကြပါတယ် ။
ငါးနာရီထဲနဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေ အမြင့်ဆုံး ဗီဒီယိုတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်လည်း စံချိန်ချိုးခဲ့တာပါ. ပရိသတ်တွေအတွက် နီနီ့ရဲ့ ခင့်မှာတမ်းလေး ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တာမို့ မှတ်ချက်ပေးဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်
Vidoe ကိုအောကျမှာ တငျပေးထားပါတယျ။
နီနီ ခငျဇျော တဈ ယာကျ မ တူညီ တဲ့ ဖြျောဖွေ မှု အ သဈ အ သဈ တှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ရသမြိုးစုံပေးတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကိုငျလှုပျနိငျစှမျးရှိတာ အားလုံးအသိပါ။ အခုတဈခေါကျမှာလညျး နီနီတဈယောကျ ပရိသတျတှေ ဝါးခနဲ အံ့အားသငျ့ စမေယျ့ တေးဂီတ နောကျခံ ဇာတျလမျးတိုလေးတဈခုကိုတငျဆကျလိုကျပွနျပါတယျ။
ခငျ့မှာတမျး အမညျရှိတဲ့ ဇာတျလမျးတိုလေးကို ကိုလိုနီခတျေနောကျခံ ပုံစံ နဲ့ ပွနျအလညျတငျဆကျလိုကျတာပါ ။ နီနီတဈယောကျ ခတျေဟောငျးတေး ပုံစံ နဲ့ တငျဆကျထားပွီး သီခငျြးတဈခုလုံးကို ဇာတျလမျး ပုံစံနဲ့ ဖနျတီးထားပါတယျ ။
အိုငျဒီယာဆနျးတဲ့ နီနီဟာ သူမ ကိုယျပိုငျ Branding ဖွဈတဲ့ Super Red တံဆိပျတှကေို ပါ ကွျောငွာသဘောမြိုးနဲ့ ထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားတော့ တဈခကျြခုတျ သုံးခကျြလောကျပွတျသဘောမြိုး ဖွဈတဲ့ စိတျကူးကို တှရေ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှကေတော့ မမလေးရေ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို မှတျခကျြတှမှော နီနီအတှကျ ဂုဏျပွုပွောဆိုနကွေသလို ၊ ပွနျလညျမြှဝသေူတှေ ကလညျး ထောငျသောငျးမက အားပေးကွမျးခဲ့ကွပါတယျ ။
ငါးနာရီထဲနဲ့ ကွညျ့ရှုသူတှေ အမွငျ့ဆုံး ဗီဒီယိုတှထေဲက တဈခုအဖွဈလညျး စံခြိနျခြိုးခဲ့တာပါ. ပရိသတျတှအေတှကျ နီနီ့ရဲ့ ခငျ့မှာတမျးလေး ကို တငျဆကျပေးလိုကျတာမို့ မှတျခကျြပေးဖို့ မမကွေ့နဲ့နျော
အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရသည့် ဟိုတယ်ပန်းကန်ဆေးဝန်ထမ်း နစ်နာကြေး ဒေါ်လာ ၂၁သန်းခွဲ ရ
“ဦးဖိုးဖြူ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ ဘီပိုး စီပိုး အခမဲ့ ကုသနိုင်ပါပြီ”
ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရဲ့ မင်းသွေးအတွက် ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း